समाज सामाजिक बहस
मे 21, 2019 मे 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, विधुवा
समाजमा विधुवालाई हेर्ने नजर फरक देखिएको छ । यस्तो बनाउने सवै पुरूष नै हुन भन्दा खासै फरक छैन । एउटा पुरूषको श्रीमती वितेमा ६ महिनाभित्र अर्को श्रीमती भित्राएको हुन्छ । समाजले विधुवा हुनुलाई गलत परिभाषा गरेको पाइन्छ । एउटा पुरूषले विवाह गर्दा सेक्सको कुरा उठेको पाइदैन तर एउटा विधुवाले विवाह गर्छ भने समाजले सेक्सको कुरा उठाएर बदनाम गर्ने कोसिस गरेको पाइन्छ । सेक्स भन्ने कुरा हरेकको आवश्याकता होला तर त्यो भन्दा माथि हामीले सोच्छौं भने उसलाई पनि बोल्ने राम्रो साथी चाहिएको हुन सक्छ ।
नेपाली धर्म संस्कृति, राजनीति र समाज कता गई रहेको छ
समाज आमुल परिवर्तन भयो तर विधुवाको हकमा यो समाजले हेर्ने तरिकामा आमुल परिवर्तन हुन सकेन । समाजको डरले उ खुम्चिएको छ उसले चाहेर पनि केही गर्न सकेको अवस्था छैन । के यही हो मानिसको बाँच्न चाहने अधिकार छिन्नु इच्छा आकांक्षालाई दवाई दिनु । यसको पछि अर्को कमजोरी विधुवाको हिन भावना पनि दोषी छ । विधुवा हुनुलाई कमजोर ठान्ने समाजले जे भन्छ त्यही कुरामा सवै महिला लागेर एउटा महिलालाई दोषी ठहराउने परिपाटी नै गलत हो भन्ने कुरा देखाएको छ ।
समाजमा विधुवाको हितमा तलदेखि माथिसम्म आमुल परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यो काम पुरूषबाट नै सुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कुरामा मेडियाले पनि विधुवालाई साथ दिन आवश्यक छ । समाजले विधुवालाई हेर्ने परिपाटी बदल्नुपर्छ । ती महिला आमा, बहिनी छोरी हुन यो कुरा जबसम्म समाजलाई मेडियाले बुझाउन सक्दैन तबसम्म एकल महिलाको हितमा राम्रो काम नहुने देखिन्छ ।
सबैको चाहना बुझ्न सक्नुु नै मानवीयता हो जस्तो लाग्छ, त्यसैले बुहारी भन्दैमा उसका हर पीडालाई बाध्यता बनाएर राख्नु उचित ठानिनु गलत हो । लाऊँ लाऊँ खाऊँ खाऊँ भन्ने उमेर बाँकी हुँदा कतिपय ठाउँमा विधुवा अवस्थामा रहेका बुहारीले समाजको परिधिको ख्याल गरेर चाहनाको बलिदान गरिरहेका बेला केटो खोजेर विवाह गराई दिन सके एकबारको जीवनमा सुखभोग गर्ने अधिकार सबैलाई रहेका कारण एकल महिलाको बिहे गरी दिनुपर्ने राम्रो काम भएको देखिन सक्छ ।
← सुत्ने कोठामा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस्
के हो एटम बम (Atom Bomb) ? →
डिसेम्बर 12, 2018 डिसेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
अगस्ट 23, 2019 अगस्ट 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0